Virgen डेल कारमेन को लागी प्रार्थना। ? कठिन मामलाहरु र सुरक्षा को लागी
भर्जिनलाई प्रार्थना गर्नुहोस् कार्मेनबाट, त्यहाँ कुनै गाह्रो अवस्था छैन जुन वाक्य मार्फत समाधान हुन सक्दैन र यस अवस्थामा कार्मेनको कुमारीलाई प्रार्थना यो भक्तिनीति रणनीति हो कि धेरै चोटि हामीले दिनहुँ दिनको सामना गर्नुपर्दछ, किनकि हामीलाई थाहा छैन हामी केहि कठिन समयमा बाँचिरहेका छौं र यसलाई रोक्नु राम्रो हो।
प्रार्थना भनेको त्यो शक्तिशाली हतियार हो जुन हामी कुनै पनि समयमा प्रयोग गर्न सक्दछौं जुन हामी चाहान्छौं वा हामीलाई चाहिन्छ।
यो कुमारीलाई हताश मानिन्छ र यो यो हो किनकि यो चमत्कार हो र उत्तरहरू प्रार्थना पछि केहि मिनेटमा देख्न सकिन्छ, प्रायः जसो केसहरूमा यो छ।
हामीलाई थाहा छ कि हामीसँग स्वर्गमा कोही छ जसले हामीलाई बुझ्नुहुन्छ र कुनै पनि परिस्थितिमा हाम्रो पक्षमा वकालत गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई शान्ति र विश्वासले भर्दछ कि सबै ठीकठाक हुनेछ।
1 भर्जिन डेल कारमेनलाई प्रार्थना गर्ने भर्जिन डेल कार्मेन को हुन्?
1.1 कठिन केसहरूको लागि भर्जिन डेल कार्मेनलाई प्रार्थना
1.2 ज्ञान र संरक्षणको लागि भर्जिन डेल कार्मेनको प्रार्थना
1.3 धन्यवाद प्रार्थना र भेटी
1.4 भर्जिन डेल कार्मेन उनको प्रेम पुग्न प्रार्थना
भर्जिन डेल कारमेनलाई प्रार्थना गर्ने भर्जिन डेल कार्मेन को हुन्?
को रूपमा परिचित Carman को हाम्रो महिला, यो भर्जिन मरियमलाई दिइएको एक वकिल हो। यसको नाम इजरायलको कर्मेल पर्वतबाट आएको हो जसको अर्थ बगैंचा हो।
कतिपय देशहरूमा उनी समुद्रको संरक्षक मानिन्छन भने अरु स्पेनमा पनि उनी स्पेनिश नौसेनाको संरक्षक मानिन्छ। भनिन्छ कि १ 1251०१ मा यस कुमारीले सेन्ट सिमोन स्टकको अगाडि देखा पर्‍यो जो अर्डरको वरिष्ठ थिए।
त्यो मुठभेडमा त्यस मानिसलाई स्केप्युलर र उसको बानी दिइयो, ती दुई प्रतीकहरू जुन विश्वभरि कार्मेलइट्सको मारियन पंथ भनेर चिनिन्छ।
कुमारी कन्यालाई श्रद्धा भनेको क्याथोलिक चर्चको चलन हो जसले यस पृथ्वीमा मानव रूपको रूपमा हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा कुमारीको महत्त्वलाई प्रकाश पार्दछ।
आज सम्म ईश्वरीय उद्देश्यहरू पूरा गर्न भगवान पिताको साधन।
कठिन केसहरूको लागि भर्जिन डेल कार्मेनलाई प्रार्थना
मसँग हजार समस्याहरू छन्: मलाई मद्दत गर्नुहोस्।
आत्माका शत्रुहरूबाट मलाई बचाउनुहोस्।
मेरो गल्तीहरूमा: मलाई ज्ञान दिनुहोस्।
मेरो शंका र शोकमा: मलाई भन।
मेरो रोगहरूमा: मलाई बलियो पार्नुहोस्।
जब तिनीहरूले मलाई घृणा गर्छन्: खुशी गर्नुहोस्।
प्रलोभनहरूमा: मलाई बचाउनुहोस्।
गाह्रो घण्टामा: मलाई सान्त्वना दिनुहोस्।
तपाईंको आमाको हृदयले: मलाई माया गर्नुहोस्।
तपाईंको अपार शक्ति संग: मलाई रक्षा गर्नुहोस्।
र तपाईंको काखमा जब यो समाप्त हुन्छ: मलाई ग्रहण गर्नुहोस्।
कार्मेनको भर्जिन, हाम्रो लागि प्रार्थना गर्नुहोस्।
एउटी आमाको रूपमा, भर्जिन मरियमलाई थाहा छ कि खतरनाक परिस्थितिमा रहेका प्रियजनलाई के कष्ट हुन्छ।
उनी योग्य छिन् र सबै कुराका सृष्टिकर्ता परमेश्वरसामु हाम्रा आवश्यकताहरूको लागि वकालत गर्ने अधिकार छ।
आत्माबाट विश्वासका साथ गरिएका प्रार्थनाहरू प्रभावकारी हुन्छन्, हामी सोध्न सक्दैनौं यदि हामीले विश्वास गरेनौं कि हामीले आशा गरिरहनु भएको चमत्कार हामीलाई प्रदान गर्न सकिन्छ, जतिसुकै गाह्रो भए पनि यो सम्भव छ जस्तो लाग्छ, याद गर्नुहोस् जब हामी प्रार्थना गर्छौं किनकि हामी यस्तो चीजको लागि सोधिरहेका छौं जुन केवल प्राकृतिक तरिकाले प्राप्त गर्न सकिन्छ।
ज्ञान र संरक्षणको लागि भर्जिन डेल कार्मेनको प्रार्थना
हे पवित्र वर्जिन कार्मेन! हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको आमा र तपाईंको पवित्र स्केपुलर लगाउने सबैको रक्षक।
आज म तपाईंको कृपालु पोशाक अघि प्रार्थना गर्दछु कि तपाईंले मलाई सँधै ज्योति दिनुहुन्छ यस जीवनको अँध्यारो मार्गहरूमा जहाँ म तपाईंको सहयोगको हात बिना नै बाटोतिर जान सक्छु।
मेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहोस् जुन म तपाईंलाई धेरै प्रशंसा गर्दछु र दिन प्रतिदिन तपाईंको सम्मान गर्दछु। अचम्मको क्षणमा मलाई नत्याग्नुहोस् तपाईंको सहायता बिना म असहाय भेडा हुँ।
हाम्रोलागि प्रकाश र सुरक्षाको लागि सोध्नु, परिवारको सदस्यको लागि वा विशेष मित्रताको लागि कुनै नयाँ कुरा छैन।
वास्तवमा यो स्वास्थ्य चमत्कार पछि सबै भन्दा धेरै अनुरोधहरू मध्ये एक मानिन्छ।
यो असुरक्षित वा असुरक्षित महसुस गर्न सक्ने संसारमा सामान्य जस्तो देखिन्छ जहाँ दुष्टता बढ्दो छ र यसैकारण भिर्जन डेल कार्मेन वा हामीलाई मद्दत गर्न सक्ने कुनै अन्य सन्तलाई प्रार्थना अनुरोध उठाउनु साँच्चिकै चमत्कारी हो।
धन्यवाद प्रार्थना र भेटी
ओहो होली भर्जिन अफ कार्मेन!
हामी ईमान्दारिताका साथ सम्मान र जवाफ दिन सक्दैनौं जुन तपाईंले हामीलाई तपाईंको पवित्र स्केपुलर दिएर हामीलाई दिनु भएको छ।
हाम्रो सरल, तर गहिरा अर्थ, धन्यवाद र धन्यवाद स्वीकार गर्नुहोस्, किनकि हामी तपाईंलाई केहि पनि दिन सक्दैनौं जुन तपाईं र तपाईंको कृपाको लागि योग्य छ।
हामी आफ्नो हृदय, यसको सारा प्रेम, र हाम्रो सबै जीवनको साथ प्रस्ताव गर्दछौं, जुन हामी तपाईंको छोरा, हाम्रा प्रभुको प्रेम र सेवामा प्रयोग गर्न चाहन्छौं, र तपाईंको मिठो भक्ति फैलाउन ...
विश्वासका साथ हाम्रा सबै भाइहरू, जससँग ईश्वरीय प्रावधानले हामीलाई जीवित र सम्बन्धित बनाउँदछ, आदर गर्दछौं र तपाईंको ठूलो उपहारलाई धन्यवादी गर्दछौं, पवित्र स्केप्युलर लगाएर, र हामी सबै तपाईंको प्रेम र भक्तिमा बाँच्न र मर्न सक्दछौं।
के तपाईंलाई धन्यवाद र प्रस्तावको क्यामनिनको प्रार्थनाको वर्जिन मनपर्‍यो?
धेरै चोटि हामी प्रार्थनाहरू बिर्सन्छौं एक पटक हामीले के सोधेको कुरा पाउँछौं तर यो त्यस्तो हुनु हुँदैन।
बाइबलले कुनै व्यक्तिलाई धन्यवाद नदेखाईकन गर्नेहरू र अरूले गर्ने कथा बताउँछ।
त्यस्तै गरी हामीले गर्ने प्रस्तावहरूको साथ हामी आफूले चाहेको चीजहरू बिर्सेका छौं।
कृतज्ञतासाथ प्रार्थना गर्नु भनेको इशारा छ जुन स्वर्गमा कसैको ध्यान नपर्ने हुन्छ। जब हामी प्रस्तावहरू गर्छौं र ती पूरा गर्दैनौं, यो आकाशमा पनि देखिन्छ।
जे भए पनि तपाईले जे वाचा गर्नुभयो भन्नेमा धन्यवाद दिन वा तिर्न धेरै समय लाग्छ, महत्त्वपूर्ण कुरा यो गर्नु हो।
भर्जिन डेल कार्मेन उनको प्रेम पुग्न प्रार्थना
ओ वर्जिन अफ कार्मेन, मेरी परम पवित्र!
तपाईं सबैभन्दा महान जीव, सबैभन्दा उदात्त, शुद्ध, सब भन्दा सुन्दर र सबै भन्दा पवित्र हुनुहुन्छ।
ओह यदि सबैले तपाईंलाई चिनेका भए, मेरी महिला र आमा, यदि सबैले तपाईंलाई योग्यको रूपमा प्रेम गरे भने!
तर म सान्त्वना पाएको छु किनकि स्वर्ग र पृथ्वीमा धेरै धन्यका आत्माहरू तपाईंको भलाई र सौन्दर्यको साथ बाँच्दछन्।
र म अधिक खुशी छु किनकि भगवानले तपाईलाई एक्लो माया गर्नुहुन्छ सबै मानिस र स्वर्गदूतहरु संग।
मेरो सबैभन्दा मायालु रानी, ​​म, दयनीय पापी पनि तपाईंलाई माया गर्छु, तर तपाईलाई योग्यको भन्दा म तपाईंलाई थोरै माया गर्छु; यसैले म तपाईलाई अझ ठूलो र मायालु प्रेम चाहन्छु, र तपाईले मलाई भेट्नुपर्नेछ, किनकि तपाईलाई माया गर्नु र तपाईको पवित्र स्कापुलरलाई बोक्नु महिमाको लागि पूर्वनिर्धारणको संकेत हो, र यो अनुग्रह जुन परमेश्वरले मात्र प्रदान गर्नुहुन्छ जो प्रभावी ढ save्गले बचत गर्न चाहन्छन्।
त्यसोभए, तपाईं परमेश्वरबाट सबै कुरामा पुग्नुहुन्छ, मलाई यो अनुग्रह प्राप्त गर्नुहोस्: मेरो प्रेम तपाईंको प्रेममा जल्नेछ, तपाईंले मलाई देखाउनुभएको स्नेह अनुसार; म तिमीलाई एउटा सच्चा छोराको रूपमा माया गर्छु, किनकि तपाईं मलाई आमाको सबैभन्दा मायालु मायाले प्रेम गर्नुहुन्छ, ताकि पृथ्वीमा यहाँको प्रेमको निम्ति तपाईंसँग सामेल हुनुहोस्, म तपाईंसँग पछि सदाको लागि अलग हुनेछैन।
भर्जिन डेल कार्मेनलाई उनको प्रेममा पुग्नको लागि यो प्रार्थना अत्यन्त प्रबल छ।
साँचो प्रेम पाउनु भनेको चिन्ताको विषय हो जुन हाम्रो जीवनमा सधैं उपस्थित हुन्छ, विशेष गरी जब कुनै निश्चित उमेर पुगेको छ वा जब तपाईं अविवाहित रहनुहुन्छ जब तपाईं एक निश्चित समयको लागि एक जोडीको रूपमा बस्नुहुन्छ।
यस्तै तरिकामा यो प्रार्थना ती केसहरूमा प्रभावकारी हुन्छ जहाँ एक पार्टनरलाई प्राप्त गर्न निश्चित हदसम्म कठिनाई दर्साउँछ वा जहाँ प्रेममा पर्न वा कसैलाई जित्नु धेरै गाह्रो हुन्छ, यी प्रार्थनाहरू प्राप्त गर्न वा उनीहरूको प्रेम प्राप्त गर्न।
याद गर्नुहोस् कि आध्यात्मिक हतियारहरू शक्तिशाली छन् र हामी तिनीहरूलाई कसरी बेवास्ता गर्न सक्दैनौं यो कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, यो एक शक्तिशाली रणनीति हो जुन हामी विश्वासको साथ यो समयमा चाहन्छौं भने प्रयोग गर्न सक्दछौं कि यस प्रार्थनाको सामर्थ्य जवाफ दिइनेछ।
तिनीहरू सबै राम्रोको लागि छन्, मद्दत र अक्सुलियोको लागि सोध्नुहोस् र यो गलत हो कि एक पटक भन्दा बढी गर्नुहोस्।
तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्न कार्मेनको भर्जिनमा प्रार्थनाको शक्तिको लाभ लिनुहोस्।